Uto Ahịa Mobile | Martech Zone
Uto ahia ahia
Monday, May 21, 2012 Adam Obere
Nọmba ndị a na-atụ egwu ma na-aga n’ihu. Ọtụtụ mmadụ na-ere ahịa na ekwentị ha maka ekwentị, na-ewepụta nnukwu mkpa maka ngwa ahịa, ngwa ahịa kachasị mma na ebe nrụọrụ weebụ, ọrụ ndị dabere na ọnọdụ na mkpanaka mmekọrịta na mmekọrịta mmekọrịta na mpụga ụlọ na ụlọ ọrụ.
Site na Infographic: Ekwentị ọdịnala na-ejide ssmartphone dị ike karị. Ejiri njikọ Internetntanetị dị elu na ndị na-arụ ọrụ ọkụ ọkụ ngwa ngwa, ngwaọrụ ndị a etinyela bọọdụ mkpọsa mmekọrịta zuru oke na akpa anyị. Kedu ka ndị mgbasa ozi si eji ohere a dị ukwuu eme ihe, ndị ahịa na-egekwa ntị? N'okpuru ebe a, anyị na-enyocha ụwa na-arịwanye elu nke ịzụ ahịa ekwentị.
Infographic site na Kpọtụrụ.
Tags: infographicọrụ ọnọdụmgbasa ozi mgbasa oziMobile na Mbadamba ụrọahịa efuKoodu QRekwentị mara mma
Mee 22, 2012 na 5: 26 AM
Ndewo Adam, nke ahụ bụ ihe ederede mara mma. Adị m ntakịrị obi abụọ banyere akụkọ QR code. 50% nke ndị nwe ama ama na-enyocha QR koodu dị ka ọnụọgụ nnabata dị elu. Ọzọkwa, 18% nke ndị na-azụ ahịa mgbe nyochachara chọrọ ihu akwụkwọ mkpanaka kachasị mma na oghere ntụgharị. Enwere m ike ikwu maka Jamanị mana mana ọ bụghị ikpe. Echere m na ihe dị ka 70-80% nke Koodu m na-enyocha na-eduga na saịtị desktọọpụ ebe ihe mgbaru ọsọ m gbanwere dị anya n'akụkụ ụzọ na-adịghị mma. Ndị ahịa German ọ dịla nnọọ n'azụ?
Yabụ m na-eche maka data na-enye nsonaazụ nyocha a. Ozi ọ bụla banyere nke ahụ?